Dhageyso: Andalus Oo Baahisay Wareysi lala Yeeshay Mid Kamida Raggii Fuliyay Weeraradii Madaxtooyada iyo Xarunta Nabad Sugidda.
Monday February 26, 2018 - 06:01:30 in Wararka by Super Admin
Idaacadda islaamiga Andalus ayaa xalay baahisay barnaamij gaar ah oo ku saabsan weeraradii aadka u xooganaa ee Jimcihii lasoo dhaafay lagu qaadayo xarumo ammaankooda si aad ah loo adkeeyo oo dowladda Federaalka ay ku leedahay magaalada Muqdisho.
Cabdullaahi sheekh Aadan Sheekh Axmed Guure oo Ku magac dheer Cadiyatullaah kanasoo jeedo beesha Mariixaan ee degto gobolka Gedo wuxuu ahaa Ninkii fuliyay weerarkii Naf-hurnimo ee ka dhacay Hoteelka Doorabin ee kaabiga ku haya xarunta Nabad sugidda DF-ka ee Habar Khadiijo loo yaqaan.
Wuxuu wareysigan uga hadlayaa arrimo ay kamid yihiin sababta ku riixday in uu weerarka fuliyo isagoo farriimo dhaxalgal ah u diray shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah iyo xataa madaxda dowladda Federaalka.
Weeraradii dhacay Jimcihii lasoo dhaafay ayaa gallaaftay nolosha tobaneeyo kamid ah askarta iyo saraakiisha dowladda Federaalka waxayna ahaayeen weeraro Mantaanno ah oo lagu beegsaday madaxtooyada iyo isku imaatin ku dhawaa xarunta Nabad sugidda.
Halkan ka degso Wareysiga lala yeeshay Cabdullaahi Sheekh Aadan MP3
4 Qof American ah oo ku dhintay Rabshadihii ka dhacay Xarunta golaha Koongareeska Mareykanka.
XSHM oo Jihaadiyiinta Maali ku bogaadisay Weeraradii ay ku laayeen Askarta Faransiiska ah.
Al Shabaab oo weerar culus ka fuliyay deegaan katirsan gobolka Mandheera.
Sarkaal katirsan Nabad Sugidda DF-ka oo Muqdisho lagu dilay.